Arturo Vidal oo go’aan ka gaaray haddii Kooxda uu milkiyaddeeda leeyahay ay mushahar dhimis ku sameynayso xiddigaheeda – Gool FM
(Barcelona) 04 Abril 2020. Rodelindo Roman ee uu iska leeyahay laacibka Barcelona ee Arturo Vidal ayaa ku dhawaaqday inaysan ciyaartoydeeda ka jari doonin mushaarkooda inta uu dunida ku sii fidayo xanuunka Coronavirus.
Kooxda Vidal uu milkiyaddeeda leedahay ayaa ka ciyaarta horyaalka heerka saddexaad ee dalka Chile, waxaana ay go’aansadeen in mushaharka ciyaartoyda ay u qaadan doonaan sidii markii hore ay u heli jireen oo kale.
“Rodelindo Roman waxa ay qaddarinaysaa heshiisyada ciyaartoyda iyo in ciyaaryahan walba la caawiyo haddii xitaa aysan jirin wax ciyaar ah.” ayaa lagu soo qoray bogga rasmiga ah ee Kooxda Vidal.
Sidoo kale kooxda ayaa qoraalkeeda soo raacisay inay rajeynayso in goor dhow kubadda dib loo ciyaaro, dunidana ay ku soo laabato xaaladdeedii caafimaad.
Horraan xiddigaha Barcelona ayaa aqbalay inay dhimaan qayb badan oo ka mid ah mushaarkooda, sidoo kalena Vidal ayaa saaxiibkiis Gary Medel kala shaqeynaya taageeridda hay’adda Red Cross ee dalkooda Chile ka dhisan si loola dagaallamo Coronavirus.